Understanding Javscript · HTML 5
Create A New Paragraph
Addaline break
Addaline break Opportunity
AddaHorizontal Rule
AddaBlank Space
Make Italic Text
Add Block Quote
Add Small Text
Createanumber list
Create Nested List
Create Definition List
Insert Special Character
Create an Internal Style Sheet
Applyastyle locally
Applyastyle toatag
Applyastyle usingaclass
Applyastyle using ID
Apply to media specific style sheets
Link to Style Sheets for mobile phone
Styles for Nested Tags
Chainging Font Size
Control line spacing
Control Letter Spacing
Add Background Colors
StyleaBulleted List
Web Page Images
Add an Image asaFigure
Align an Image Horizontally
Align an Image Vertically
Stop Text Wrap
Add Space around an Image
Addameter Image
OpenaNew Window withaLink
Link to and Area on the Same Page
Link to Another File Type
Link to an E-Mail Address
Change Link Colors
Change Link Hover Effects
Define Link Relationships
Understanding Table Structure
Add Table Borders
Adjust Cell Padding and Border Spacing
Adjust Cell Width and Height
AddaCaption to Table
AddaBackground Color to Cells
AddaBackground Color toaTable
Adjust the Table Sizes
Change Cell Alignment
Extend Cells Across Columns and Rows
UseaTable for Page Layout
Types of Form Elements
Send Form Data to an E-Mail Address
AddaLarge Text Area
AddaMenu List
AddaDate And Time Input
Add an Email Field
AddaURL Field
AddaRange Slider
AddaFile Upload
AddaSubmit Button
RequireaField
AddaPlaceholder
Validate Input withaPattern
DefineaSection
DefineaHeader
Define an Aside
DefineaFooter
Understanding Script Events and Handlers
Insert the Current Date and Time
Display an Alert Message Box
DisplayaPop-up Window
CreateaImage Rollover Effect
ShowaHidden Element
Change Page Content
DisplayaCalculation
Set UpaCanvas
Slice an Image
AddaGradient
Rotate Canvas Content
Animate canvas Content
InsertaVideo File
Insert an Audio File
Offer Multiple Sources
Javscript ဟာ script language အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ အသုံးပြုသူ click လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် cursor ကို ပုံပေါ်မှာ တင်လိုက်တဲ့ အခါ စသည့် event တွေ ပါဝင်လာပါတယ်။ Script ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ထဲက ဖြစ်နိုင်သလို အခြား တနေရာက script တွေကိုလည်း ယူသုံးနိုင်ပါတယ်။
Javscript ဟာ pouplar script language ဖြစ်တာကြောင့် browser တွေ အကုန်လုံးမှာ support လုပ်ပါတယ်။ Webbrowser ဟာ client-side မှာ ရေးသားတဲ့အတွက် javscript ကို client-side scripting လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း node.js ကို အသုံးပြုပြီးတော့ server side အတွက်ပါ ရေးသားနိုင်ပါပြီ။
Javscript ကို html code နဲ့ တွဲပြီး ရေးနိုင်သလို အပြင်က .js file ကိုလည်း ယူသုံးနိုင်ပါတယ်။ html code အထဲမှာ ရေးလိုရင်တော့ <script> နဲ့ </script> ကြားမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
<script type="text/javscript" src="external.js"></script>
ဒီ code မှာ ဆိုရင် external.js file ကို
function ဆိုတာကတော့ အလုပ်လုပ်မယ့် အပိုင်းလေး တစ်ခုပါ။ function ရဲ့ အနောက်မှာ function name ပါပါတယ်။ function name ကို showalert ဆိုပြီး ပေးထားပါတယ်။ function name အနောက်မှာ arugment parameter ပါပါတယ်။ ဘာ data မှာ ထည့်တာကို allow မလုပ်ထားတာကြောင့် showalert() ဆိုပြီးပဲ ရေးသားထားတာပါ။ alert ဆိုတာကတော့ message box ပြမယ့် function ပါ။ javscript မှာ ပါပြီးသား function ပေါ့။ double quote ကြားမှာ ရေးချင်တဲ့ စာကို ထည့်ပြီး ရေးသားရပါတယ်။
Javscript နဲ့ HTML ကို တွဲသုံးတဲ့အခါမှာတော့ DOM (document object model) က မဖြစ်မနေ အရေးပါပါတယ်။ DOM ဆိုတာကတော့ HTML ကို အဆင့်ဆင့် ခွဲသွားတဲ့ tree ပုံစံပါ။
Document root ဟာ <html> က စပြီးတော့ သူ့အောက်မှာ <head> နဲ့ <body> ရှိပါတယ်။ <head> အောက်မှာတော့ <title> ရှိတယ်။ <title> ထဲမှာတော့ My Page ဆိုတဲ့ စာ ရှိပါတယ်။ Javscript ဟာ DOM ကို အသုံးပြုပြီးတော့ အဆင့်ဆင့် ခေါ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ value ကို ရအောင် access လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် id attribute ကို ခေါ်ပြီးတော့ DOM object ကို ရနိုင်ပါတယ်။
var k = 1;
k = k + 5;
အဲဒီမှာဆိုရင် k ထဲကို ၁ ထည့်ထားပါတယ်။ ပြီးလျှင် k ထဲကို k ထဲက တန်ဖိုးနဲ့ ၅ နဲ့ ပေါင်းပါဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။
နောက်ထပ် ဥပမာ ကြည့်ရအောင်။
var x = "Hello";
x = x + " World!";
ဒီမှာဆိုရင်တော့ x ကို Hello ဆိုတဲ့ စာထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ World! ဆိုတဲ့ စာကြောင်း ကပ်လိုက်ပါတယ်။ alert ဆိုတာကတော့ javscript မှာ messagebox ဖော်ပြဖို့ အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အနည်းငယ်လေးတော့ တီးမိခေါက်မိရှိလောက်ပါပြီ။